News - Mmetụta nke cantilever ogologo na shoring ibu nke diski-mkpọchi formwork
Akụkọ ọsọ ọsọ
Email Nkwado anniesun8957@gmail.com
Kpọọ Nkwado 0086-18800563677
Lockgba mgbaaka Ringlock
Brack Diagonal Brace
Ogwe osisi Ringlock
Mkpọchi Board mgbodo
Octagonlock Standard Nrụgide Ọrụ
Octagonlock Board mgbodo
Cuplock Board mgbodo
Cuplock ígwè plank
Kwikstage Kee Ogwe
Haky Single tube Doo
Ogwe aka Haky Guardrail
Aluminium siri ike ichu nta-ụdị
Mason Frame / Frame Frame
Aluminom Board na nko
Aluminom Board na Plywood
Oghere Ugboro abụọ Ma ọ bụ Otu Oghere Oghere Cross Brace
Nrụgide oru dị arọ
Light Ọrụ Props
Hembra Push dọpụta
Mmetụta nke ogologo cantilever ogologo na ịmị ibu nke diski-mkpọchi formwork
Rapid Scaffolding (Engineering) Co., Ltd eguzobewo usoro mmekọrịta ya na Mahadum Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ ebe 2004 ma guzobekwa otu ìgwè ndị ọkà mmụta sayensị siri ike iji nyochaa usoro nyocha miri emi maka emetụta mkpọchi disk na-akwado ihe nchekwa. Ogologo nke cantilever bụ ebe dị anya site na elu ihu nke mgbanwe U isi na akwa kachasị elu nke nkwado nkwado, dị ka ogologo cantilever n'ogo dị n'okpuru, nke a na-akpọ ogologo cantilever.
Cantilever ogologo na-mkpa ka a gbanwee izute formwork elu nke imewe chọrọ. Dị ka ebe dị anya site na ọkọlọtọ ruo na nke kacha nso octagonlock diski bụ 250mm ma ọ bụ 325mm (isi olu akwa elu), na-atụle ịdị elu nke mgbanwe U isi, ya mere ogologo nke cantilever hà ma ọ bụ karịa 300mm n'ozuzu.
Ọnọdụ kachasị ike nke nkwụsi ike nke mkpọchi mkpọchi diski dị na nkwado nkwado, iji mụọ mmetụta nke cantilever ogologo a na ikike nkwụsi ike nke usoro ihe atụ, na-ewere 4 × 4 na-agbatị 1 nzọụkwụ na 4 × 4 span 4 nzọụkwụ formwork support Ọdịdị dị ka ihe nyocha (ọkọlọtọ nzọụkwụ h = 1500mm), tụlee iche iche ogologo nke cantilever ọgwụgwụ na- 300 ~ 1000mm, na-eme ka nonlinear kwụsie ike site 50mm oge ọ bụla maka ịgbakọ.
Na cantilever ogologo na-amụba na formwork support kama, kacha mwepụ na-aga, nkwado support Ọdịdị na-ekwe ekwe ekweghị ka obodo akwusighi na n'elu cantilever ọgwụgwụ. E gosiputara ọnọdụ enweghi nsogbu n'ime ọgụgụ ndị a:
Ngụkọta oge nke ike kwụsiri ike nke na-arụ ọrụ nke 4 × 4 na-agbatị 1 nzọụkwụ na 4 × 4 na-adịru 4 usoro diski mkpọchi usoro nkwado na ogologo nke akụkụ cantilever na-egosi na tebụl na-esonụ:
Site na tebụl a, ọ gosipụtara na ogologo cantilever nwere mmetụta dị ukwuu na ikike nkwụsi ike nke nkwado nkwado. Ọmụmaatụ: maka 4X4 gbatịa 4 nzọụkwụ nkwado Ọdịdị, mgbe a = 300mm, ya ike loading ikike Pcr = 77.91KN, ma ọ bụ mgbe a = 1000mm, ya anụ loading ike Pcr = 21.97kN, mgbe a = 300mm, kwekọrọ ekwekọ ikike ikike 27,9% .
Nsonaazụ gosiri na cantilever ogologo nwere mmetụta dị ukwuu na ikike nkwụsi ike nke usoro nkwado nkwado nke formwork. Yabụ, na imewe injinịa na iwu ụlọ, ogologo nke cantilever kwesịrị ka a chịkwaa ya iji hụ nchekwa nke ụdị nkwado ụdị akwụkwọ a. Ndị na-ese ihe kwesịrị ịdabere na ibu (vetikal, kwụ) nha. Maka ogologo cantilever ogologo, usoro a ga - eji belata usoro iji belata nchekwa nke usoro nkwado ụdị.
Post oge: Jan-16-2020
Otito Scaffolding (Engineering) Co., Ltd. bụ onye na-eduga ụlọ ọrụ na scaffolding ụlọ ọrụ na China. Kemgbe mmalite ya na 2003,
Ibu ikike nke ọkọlọtọ
Mmetụta nke ogologo cantilever ogologo na ...
Otutu Scaffold Production Flow